Mutemo, Health uye vakachengeteka
Nemhaka yezvichangobva njodzi wokuUkraine paChernobyl uye Japanese Fukushima-1 uye Fukushima-2, nemwaranzi kudzivirira akava rakapotsa rimwe dambudziko pose vanhu. Makore 50 apfuura radioactivity aiva mamwe husingaoneki pfuma mamwe zvine maatomu akafanana, zvino kuora kwatangwa yenyukireya kunyange kuziva mudzidzi, nokuda kwaizvozvo, uye nezvengozi nemwaranzi.
The kupfuura ngozi yeAlpha, Beta uye wegamma mwaranzi zvinogona kukuvadza dzose zvivako muviri (nemwaranzi kurwara), malignancy, masero zvirwere uye rufu (rikwanise nemwaranzi chirwere).
Zvichienderana mhando nemwaranzi, uye siyana kuti mwaranzi dziviriro mumiriri, sezvo mumwe PARTICIPLE kunoratidzwa kwayo rakapinza kugona. Saka, Alpha-inoramba kuva vaifanira zvikuvadze Zvisinei, regai pinda kunyange kuburikidza zvake papepa. Chipingamupinyi kuti Beta mwaranzi aigona kuva rinoonekera. Asi wegamma nemwaranzi ane matunhu rakapinza simba. Kudzivirirwa kubva nokushandisa kutungamirira kana simbi ndiro.
nemwaranzi kudzivirirwa kunosanganisira kwete chete wenyama chipingamupinyi pakati pemunhu anokonzera nemwaranzi muviri. Radioactive nezvimedu nyore kupinda muimba muviri kuburikidza kufema turakiti, ari zvomudumbu turakiti.
Nzira kudzivirira pamusoro nemwaranzi, zvichienderana nzira rakakamurwa marudzi akawanda:
Time. Zvichienderana nguva kubva pakatsaurirwa nokuputika tsaona yenyukireya, nemwaranzi dose zvinosiyana zvikuru: kwemakore 2.5-3 nayo ipfupi munenge ka100.
Patasvika chinoshanda chinhambwe kubva nemwaranzi kwaibva kana hypocenter. With kuwedzera kure kubva kwacho 2 kakapetwa nemwaranzi pamwero ipfupi kusvika 4 nguva.
Mechanical zvipingamupinyi dzataurwa pamusoro apa, sezvo wakanaka nemwaranzi dziviriro. Asi hazvibviri kazhinji kusarudza inova nemwaranzi tinofanira kuita, uye saka unyatsoshandisa yezvisikwa zvipingamupinyi (izvo, zvisinei, regai kudzivirira pamusoro wegamma mwaranzi, asi chete simba navo): zvidhina kana kongiri masvingo masendimita anenge 40 mukobvu, simbi kana vatungamirire kanganisa kuti 8-13 cm masendimita 90 ivhu. The yakanakisisa Chidzitiro pamusoro wegamma nemwaranzi ndiyo mvura.
Uyezve, pane dziviriro pachako kubva nemwaranzi. Izvi zvinosanganisira guruva chifukidzo uye rabha Magorovhosi Chipfeko (kubva Arifa nemwaranzi), chifukidzo (Beta nemwaranzi), mapepa akasungirwa zvose nzvimbo pachena mumuviri (Nyuturoni nemwaranzi).
Yandakapiwa nemwaranzi anokwanisa kupinda napakati zvomudumbu turakiti, zvakakodzera kudzivirira naro, uye mvura uye chikafu. To mvura iyi midziyo anofanira chisimbiso, uye zvakafanana zvinoshandawo zvigadzirwa zvokudya; zvinofanira kugara mu rakanamwa polyethylene uye nokungwarira yakashambidzwa nemvura yakachena pamberi kushandiswa kuti kugeza kure radioactive guruva.
Panewo makemikari nzira yokudzivirira. Pasinei vakawanda kudavira, ichi hachisi ayodhini! Kana wabatwa akawanda, iwe kuchangokukuvadza pachako, asi vhitamini zvivako pamwe ayodhini anogamuchirwa. Uyewo chinobatsira chelators, nyore iyo - kusashanda kabhoni. Maererano nedzimwe nyanzvi, ane radioprotective ehupfumi tincture pamusoro Eleutherococcus. mercaptoalkylamines yakavakirwa mishonga ndivo zvinodhaka akanyorerwa kudzivirira nemwaranzi.
Nokuti decontamination pamusoro hukawanika zvinhu zvakasiyana-siyana uye pfungwa kushandiswa mvura yakachena uye sipo mhinduro.
Panguva renyukireya vanhu vakabvira vaunganidza anoyevedza chitoro mashoko pamusoro mashandiro chiito pamusoro-siyana nemwaranzi, sei kuchengetedza pamusoro pavo. Zvisinei, 100% kudzivirira nemwaranzi haisi inopiwa mumwe wavo, pasinei nokuti nezvengozi pakuputika kwenyukireya panyika iri chaizvo kuitika kukwana mamiriro ezvinhu chirimwa kushanda uye 'dzine zvombo zvenyukireya' zvombo vasingadi nyika.
The chikuru Pfungwa yepamusoro vimbiso uye unhu unhu
Weight 300: Chii ichi? Iri dambudziko, asi kwete gomo. Ndiyo tariro youpenyu
Inokuvadza mamiriro ezvinhu - zviri ... kupatsanura ezvinhu ngozi
Labor kudzivirira vakadzi vanoshanda muna mukugadzira
Categorization pamusoro kwakavakirwa moto uye kuputika njodzi: tch. Categories ose kwakavakirwa moto uye kuputika njodzi: mienzaniso
Sei vedhipatimendi rinodzima moto kubva Mobile: zvinhu mitemo
Makwikwi ekutamba kwemazororo emakambani
Blue Dragon: ngano kana chokwadi?
Multiplayer. Chii uye chii unogona kuridza?
Description shamwari - basa kuchikoro chepuraimari
Senhetembo shoko "kofi": nyora ndima mangwanani
Publications uye kunyora nyaya
Scholl (cushioning insole): mhinduro dzevatengi
Kugerwa pamwe akaveura temberi - munhukadzi nzira kupikisa vanhu
Kururama kutaura - abudirire
Zvinonaka uye inotapira zvihwitsi Apple: musha yokubikira resipi
Miedzo nokuti tupukanana: nzira noupenyu hwakanaka
Kukosha kwezita racho. Dobrynya - hero yeSlavic
Hot Shoes "Mifer" Size chati kubva mugadziri